Banded Mongoose - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
I-Banded Mongoose [Mungos mungo]
I-Banded Mongoose (Mungos mungo) amadoda anzima kunamabhinqa ngexesha lokuqala. Xa sele ziindala ziya zifana ngobukhulu kunye nobunzima, obunzima malunga no-1.5 kg. Le Mongoose ibonakaliswe ubuso obunxantathu, obunobuso kunye neendlebe ezibanzi. Zineemisila ezide kunye neengubo ezide. Umbala onobuninzi obunomxholo ongwevu nantsundu, ezikhanyayo kunye ezimnyama ngaphaya nasemacaleni. Ngaphantsi kweengxenye ziyakhanya kwaye zinemilenze emnyama.
Izilwanyana ezinawo umqolo ziyingxenye ebalulekileyo yokutya, ikakhulukazi izilwanyana kunye nezilwanyana. Ngaba ngamanye amaxesha uya kuthatha ixhoba elikhulu njengeentonga kunye nenyoka. Izikhuphelo zokubalekela zihlala zichithwa kwiititi ezidliwayo. I-Mongoed Mongoose nayo isondla amaqanda eentaka zezilwanyana ezisemhlabeni kunye nezilwanyana ezinwabuzelayo. Baqhaqha amaqanda ngee nzipho ngaphambili ziphose emva kwazo ukuzama ukuwaphula.
I-Banded Mongoose ityala eliphakathi kwimizuzu engama-2.6. Ngaphakathi kwepakethi, iilitha ziveliswa kwi-synchrony emva kwexesha lesigxina sesibhozo ukuya kweyesithoba. Ukunakekelwa ngokubambisana kwenzala kwenzeka. Ukubeleka kuvamise ukuphela kwenkathi yemvula, kwaye ngexesha lokuphila kwakhe umlinganiselo wesetyhini 1.4 litter ngonyaka.
I-Banded Mongoose ihlala kwiqela ezingunaphakade kunye ezihlanganisiweyo phakathi kwezi ntandathu-amashumi amane, abandakanya abadala abali-shumi elinantlanu enamantshontsho alo. Ubukhulu beqela kule ntlobo bukhulu kunabo bonke abazitholayo. Zombini ziselisaamabhinqa badluliselwa kwiqela ezintsha, kwaye ngale ndlela yokuhamba kwemfuza yoluntu ifezekileyo.
Apho zifumaneka khona:
Ukusasazwa kwe-carnivore encinci kakhulu eMzantsi Afrika, kunqamle kwi-savannas esempuma ye-woodland, ukusuka kwiNxweme yaKwaZulu-Natali ukuya ngasentla ukuya kwizinkuni zaseMpumalanga, kumaphondo aseMntla nakumaNtshonalanga nakwi-Mozambique. Kukhona i-hiatus yokusabalalisa phakathi kwalapha ngasentla kunye nabantu abahlala ngasentla ngasentshonalanga eBotswana naseNamibia.
Isisindo (Ibhinqa): 1, 0 - 1, 4 kg
Ubunzima (Indoda): 1, 0 - 1, 4 kg
Ubude (abafazi): 55 cm
Ubude (Indoda): 55 cm
Akunabantwana abaselula: 2 - 8
Ukukhula koSondo: 1 unyaka
Isisindo sokuzalwa: 20 g
Ukuzala: Abantwana aba-2 - 8 bazalwa emkhatsini we-midsummer kwaye bangaboni kunye nenye inwele. Amehlo avuleka emva kweentsuku ezili-shumi.
Iinzwane ezi-ntlanu eziphambi kweenyawo; Inzondo yokuqala ingabonakalisa kwi-spoor xa isilwanyana sihamba ngokukhawuleza kodwa singabonakali xa sithatha okanye sisebenza. Iintlwana ezinamahlanu ezinyaweni, kodwa kuphela uhlahlo lwezandla zokuqala lwezwanyane eziboniswa kwi-spoor, emva kwezinye iinzwane ezine.